Nidaamyada xayndaabka tuubada - Divenland
Fasax dhoobada ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa sidii qalab qurxin oo shaqeynaya, wuxuu ku yimaadaa qaabab iyo cabbiro kala duwan, culeyska halbeega iyo cufnaanta. kala duwanaanshaha, iyo sida loogu dhajiyo sheygan waara si fiican waligiis ayaa walaac looga qabay. Imaatinka ku-dheji-tireedyada ayaa si ilaa xad ah u xaqiijiyey isku hallaynta mashruuca isku xidhka, iyo unugyada saxda ah ee unugyada unugyada waxay xaqiijin karaan in noocyada kaladuwan ee taayirrada Dhismaha lagu beddelo waxyaabo kala duwan.
Shuruudaha qasabadda dhoobada ayaa lagu buuxin karaa iyada oo lagu daro waxyaabaha alaabta cellulose ah. Madaafiicda si fudud ayaa loo ridi karaa oo loo isticmaali karaa; haynta wanaagsan ee biyaha waxay yareynaysaa xaddiga biyaha ku jira hoobiyaha ee ay soo dhuumaaleeyso sheybaarka iyo tiirarka, waxeyna yareynaysaa qaddarka biyaha ku jira madaafiicda ee ay soo dhuumaaleeyso sheybaarka iyo tiirarka. ku hayaa xayndaabka inta ugu badan ee suurtogalka ah, taas oo u saamaxeysa dahaarka hoobiyeyaasha inay sii xirnaadaan muddo dheer, oo ay si aad ah u dheer waqtiyo furan. Nafaqada saxda ah waxay siinaysaa hoosaadka madaafiicda waxayna hagaajinaysaa joogtaynta hoobiye ku jirta lakabka iyo substrate. Awooda qoynta si loo hagaajiyo ku dhagxaanta hoobiyeyaasha, gaar ahaan qaab dhismeedka dambaska sareeya; shaandhaynta gaarka ah ee wax laga beddelay ee unugyada cellulose waxay hubin karaan in dhismaha taayirku uusan hoos u dhici doonin, gaar ahaan tiirarka culus iyo marroolada. Doorashada saxda ah ee loo yaqaan 'cellulose ether' waxay u oggolaaneysaa xirxiraha dusha sare inuu gaaro xoog isku xirnaanta sare, isagoo siinaya la qabsiga heerkulka sare ee heerkulka sare ee jawiga. Xaaladdan oo kale, waxay sidoo kale siinaysaa suunka isku dhejiska waqti dheer oo furan oo la isku habeyn karo.
Maaddaama ay tahay door muhiim ah mashruuca taayirrada taayirrada, isku-darka isku-darka ma aha oo keliya hagaajinta saameynta guud ee mashruuca isku-xidhka tile-ka ama saamaynta is-barbardhiga. Door muhiim ah, laakiin sidoo kale hagaajinta dayactirka darbiga. Midab hodan ah iyo mid isku mid ah ayaa ah shuruudda aasaasiga ah ee dhowr ka mid ah alaabada ku soo biiraya alaabooyinka, kuwaas oo sidoo kale lahaan karaya hoos u dhac, porosity hoose, hawl fudud iyo xoog hore. guryaha. Qalabka loo yaqaan 'Cellulose ether' waa kuwa ugu habboon ee isku-dhafan guryahaan.
Waxay hagaajin kartaa isku-darka madaafiicda iyo ku-dhejinta alaabada salka iyada oo aan lulayn, waxayna leedahay awood haynta biyaha oo wanaagsan iyo soo-galitaan hooseeya, kaas oo sifee kara madaafiicda si buuxda ugana hortagi kara dillaaca.